Relax kwikhaya elizimele, elipholileyo - I-Airbnb
Relax kwikhaya elizimele, elipholileyo
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguHendrika
Indlu evalelweyo enobushushu obuphantsi kunye nesitovu senkuni ibekwe kwisiqwenga sepropathi phakathi kwezibuko elidala lase-Oldeberkoop kunye nefama yethu. Igadi ethandekayo enelanga enethafa ijikeleze indlu kwaye ikunika ubumfihlo obupheleleyo. Ekuseni ungahamba uye kwindawo yokubhaka yasekhaya ukuze ufumane isonka esitsha. Ukuhambahamba ngokulula kunokuqalwa kwipaki echaseneyo efana neMolenbosch. Ngeebhayisekile zasimahla ungajonga indawo enemithi, yasemaphandleni ngeendlela zonke. Indawo yokuphumla!
Jonga iifoto kwaye uzive wamkelekile!
Kukho iibhayisekile kwishedi yefama onokuzisebenzisa.
Ukongeza kokufudumeza ngaphantsi, kukho isitovu somthi ukufudumeza indlu. Isitovu sikulungele ukusetyenziswa xa ufika. Ngexesha lokuhlala kwakho unokutheza iinkuni eshedini simahla. Oku kusebenza nakwisitovu seenkuni ngaphandle.
Kukho ikhitshi elaneleyo, ibhafu kunye nelinen ekhoyo, akukho mfuneko yokuba uze nayo.
Ibhedi eyomeleleyo ephindwe kabini sele yenzelwe wena.
Kukho i-Wifi kunye ne-TV yedijithali ene-DVD player kwaye ngokuqinisekileyo kukho inani leeDVD.
Ekhitshini uya kufumana, ukongeza kwisitya, iipani kunye nezixhobo zasekhitshini, ifriji (enefriji yefriji), i-oven, i-toaster, i-hand blender, isitofu segesi esitshisa ezimbini kunye neketile. Kukho isihluzo/isibambi sekofu ukuze wenze ikofu ecothayo. Ikofu, i-coffee creamer, iti, iswekile iyafumaneka kwiintsuku ezimbalwa zokuqala kwaye kukho imifuno yasekhitshini kunye namafutha okulungiselela ukutya okumnandi. Ngethamsanqa elincinci uya kufumana imifuno emitsha egadini. Ngaba kukho into oyiphosayo? Emva koko ungahlala undibuza njengommelwane ;-)
4.92 · Izimvo eziyi-196
Ilali yeempawu ezintle zase-Oldeberkoop kukuhamba okufutshane (i-6 min.) ukusuka kwi-cottage. Ineendawo zokutyela ezipholileyo, ibhula enkulu, ivenkile enkulu, indawo yokubhaka, ifama yetshizi, ibha yesnack, ifama yepanekuku.
Kwindawo ekufutshane uya kufumana iibhayisekile ezintle kunye neendlela zokuhamba, kuninzi okufumanayo malunga neendlela zokuhamba, ngakumbi ngoku ukuba amahlathi afana nepaki ahlaziyiwe. Ngeendawo zokuhamba kunye nothungelwano lwendlela yokuhamba ngebhayisekile uya kudlula imihlaba emincinci enamahlathi amahle, iibhanki ezinamaplanga, iimoors, ingca, njl.
I-Oldeberkoop yidolophana esebenzayo;
Rhoqo ngeMigqibelo yokuqala enyangeni (ngoMeyi ukuya kuOkthobha) kukho imarike yengingqi kwilali. Apha ifama yetshizi, i-horticulturist ye-organic kunye nabanye abathengisi bendawo bathengisa iimveliso zengingqi.
Kwisiza se-Oldeberkoop ungafumana ulwazi oluthe kratya malunga nelali kunye nemisebenzi.
Izixeko zaseGroningen kunye neLeeuwarden zibonelela ngeevenkile ezahlukeneyo, iimyuziyam, iigalari, iithiyetha kunye nelifa lemveli elifanele ukubonwa.
Kufutshane nawe uya kufumana iilali zaseWolvega kunye neGorredijk ezineevenkile ezininzi. Ezi zombini zinokufikelelwa kwimizuzu eli-10 ngemoto. Kwimizuzu engama-20 usembindini weHeerenveen.
Ukuba ufuna ukuza e-Oldeberkoop ngesikhephe kwaye ufuna indawo yokulala eyongezelelekileyo, ungayifumana abantu ababini abanathi! Ungasimisa isikhephe kwizibuko elikufutshane elikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Hendrika
Mensen om me heen vind ik heerlijk, maar mag ook graag alleen zijn, het liefst buiten, in stilte, met de natuur.
Dat andere mensen even kunnen mee genieten van onze plek, de natuurrijke omgeving, het dorp, vind ik bijzonder (leuk)!
Dat andere mensen even kunnen mee geni…
Indlu evalelweyo ikufuphi nefama yethu yesikhumbuzo (ifama yobisi). Unokuba wedwa ngokupheleleyo, kodwa ungasoloko uza ngemibuzo. Ekufikeni kwam ndingathanda ukunamkela, ukuze ndikuxelele into okanye ezimbini malunga nendlu kwaye mhlawumbi. malunga nokusingqongileyo kwangoku. Ukuba oku akusebenzi ndiza kukwazisa kwaye ndikunike ikhowudi kwibhokisi yesitshixo ukuze ungene ngaphakathi.
Indlu evalelweyo ikufuphi nefama yethu yesikhumbuzo (ifama yobisi). Unokuba wedwa ngokupheleleyo, kodwa ungasoloko uza ngemibuzo. Ekufikeni kwam ndingathanda ukunamkela, ukuze ndik…